Mid ka mid ah madaxda dunida ugu caansan oo lagu tilmaamay xaaskii dile & khiyaanole – SBC
Mid ka mid ah madaxda dunida ugu caansan oo lagu tilmaamay xaaskii dile & khiyaanole
Posted by editor on Noofember 15, 2011 Comments
Vladimir Putin oo ah Ra’isalwasaaraha dalka Ruushka isla markaana mudo sanooyin ah ahaa madaxweynaha wadankaasi ayaa la sheegay in uu ahaa nin maseyr badanaa, dilaa xaaskiisa & waliba khaa’in nafta u keenay xaaskiisa.
Erich Schmidt-Eenboom oo ah qoraaga buuga
Saxaafada wadanka Ruushka & tan Jarmalka ayaa si weyn u faaqidaya buug cusub oo uu qoray nin qoraa ah oo u dhashay Jarmal ah oo lagu magacaabo Erich Schmidt-Eenboom kaasi oo si weyn wax uga qora arimaha sirdoonka Jarmalka.
Buugan ka sheekeynaya nolashii Vladimir Putin oo ahaa madaxii KGB-da Ruushka ee dalkii bariga Jarmalka la oran jirey ayaa waxaa markii ugu horeysay wax ka qortey jariirada Berliner Zeitung ee ka soo baxda magaalada Berlin, waxaana buugaasi qoraagu uu ku soo xigtey haweenay ka shaqeyn jirtey gurigii Putin uu deganaa ee ku yaal magaalada Dresden ee dalka Jarmalka.
Gabadha lagu magacaabo Alina ee laabta uu ku hayo Putin
Putin & xaaskiisa 28-ka sano ay is qabaan ee 58 sano jirka ah
Gabadha ka shaqeyn jirtey guriga Putin xiligii uu ahaa madaxa hay’ada sirdoonka Ruushka ee KGB qaybteeda Jarmalka beri waxay iyadu qudheedu aheyd haweenay ka tirsan sirdoonka Jarmalkii beri waxaana si daahsaaran (qarsoodi ah) isaga dhigtey shaqaale caadi ah iyadoo hoos ka wadatey hawlo sirdoon oo ay kula soconaysay hawlaha Putin.
Haweenaydaasi shaqaalaha ka aheyd guriga Putin waxay isfahmeen oo ay si weyn isagu soo dhawaadeen xaaska Vladimir Putin oo lagu magacabo Lyudmila, iyagoo si kalsooni ah u wada sheekaysan jirey.
Putin oo ubax gudoonsiinaya Alina Kabaeva oo la sheego in uu jecelyahay
Putin oo ku sugan magaalada Dresden oo uu deganaa 1985-1990
Hadaba qoraagu buugan wuxuu soo xigtey gabadhaasi waxaana ay ka sheekeysay wixii ka taagnaa gurigii Vladimir Putin mudadii shanta aheyd ee uu deganaa ee magaalada Dresden, waxay sheegtey gabadhaasi in xaaska Putin ay had iyo goor ka sheegan jirtey ninkeeda ayna ka caban jirtey dil iyo garaacis ba’an oo uu u geysto, sidoo kale waxay sheegtey in ninkeeda (Putin) uu had iyo goor ku sameeyo khiyaano oo uu yahay nin naago badan oo waliba ay ku qabto kadeed ba’an oo dhanka maseyrka ah.
Ninka 59 jirka ah ee Ra’isalwasaaraha ka ah dalka Ruushka ee sanadka dambe doonaya in uu tartamo madaxweynenimada dalkiisa doorashooyinka dhici doono marnaba kama qarsooneyn saxaafada in uu yahay nin xaga haweenka u jajaban, waxaa in mudo ah lagu xiririinayey gabadha lagu magacaabo Alina Kabayeva una dhalatey dalka Ruushka kana mid aheyd ciyaartoyda Ruushka ee ka qayb gala ciyaaraha Olympic-da.
Diseenbar 3, 2011 at 11:21 am
walee waa nin waan saan damacsanahey naag axsaan ma leh